Shiinaha BaGa4Se7 Kirishtaal Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Dien
kooxda bannaan: Og
Xadka gudbinta: 0.47-18μm
Isweydaarsiga weyn ee NLO: d11 = 24 pm / V
Xad gudubka @ 2μm: 0.07
Xadka burburka (1μm, 5ns): 550MW / cm2
Kiristaalo tayo sare leh ee BGSe (BaGa4Se7) waa analogga selenide ee iskuxirka chalcogenide BaGa4S7, oo qaab dhismeedka orthorhombic acentric lagu aqoonsaday 1983 iyo saamaynta IR NLO la soo sheegay sanadkii 2009, waa muraayada cusub ee IR NLO. Waxaa laga helay farsamada Bridgman – Stockbarger. Miisaankaani wuxuu soo bandhigayaa gudbinta sare ee kaladuwan ee ballaaran ee 0.47-18 μm, marka laga reebo heerka ugu sarreeya ee soo nuugista qiyaastii 15 μm.
FWHM ee (002) qalooca ruxitaanka ugu sarreysa wuxuu ku saabsan yahay 0.008 ° iyo gudbinta iyada oo loo marayo saxan dhalaalaya oo 2 mm (001) ah oo qiyaastii ah 65% oo ka sarreeya baaxadda ballaaran ee 1-14 μm Noocyo kala duwan oo heer-kulka jirka ah ayaa lagu cabiray kristantarrada.
Dabeecadda ballaarinta kuleylka ee BaGa4Se7 ma muujineyso anisotropy xoog leh αa = 9.24 × 10−6 K − 1, =b = 10.76 × 10−6 K − 1, iyo αc = 11.70 × 10−6 K − 1 oo ay weheliyaan saddexda faashadood ee loo yaqaan 'crystallographic faaris' . Heerarka kuleylka kuleylka / isugeynaha kuleylka kuleylka ee lagu qiyaaso 298 K waa 0.50 (2) mm2 s − 1 / 0.74 (3) W m − 1 K − 1, 0.42 (3) mm2 s − 1 / 0.64 (4) W m − 1 K − 1, 0.38 (2) mm2 s − 1 / 0.56 (4) W m − 1 K − 1, oo ay weheliyaan a, b, c dhidibka crystallographic siday u kala horreeyaan.
Intaas waxaa sii dheer, marinka waxyeelada leysarka dusha sare waxaa lagu cabiray inuu yahay 557 MW / cm2 iyadoo la adeegsanayo aaladda Nd: YAG (1.064 μm) oo ku hoos jirta xajmiga 5 ns garaaca wadnaha, 1 Hz frequency, iyo D = 0.4 mm size size.
BGSe (BaGa4Se7) kristal ayaa soo bandhigaya jawaabta budada labaad ee iswaafajinta (SHG) taas oo qiyaastii ah 2-3 jeer tan AgGaS2. Xadka waxyeelada leysarka dusha sare wuxuu qiyaastii yahay 3.7 jeer kan AgGaS2 crystal marka loo eego xaaladaha isku midka ah.
BGSe crystal waxay leedahay nuglaansho weyn oo aan toos ahayn, waxaana laga yaabaa inay leedahay rajo ballaadhan oo loogu talagalay codsiyada wax ku oolka ah ee bartamaha IR. Waxay muujineysaa xiisaha terahertz phonon-polaritons iyo isugeyn sare oo aan toos aheyn jiilka terahertz.
Faa'iidooyinka soo saarista laser-ka IR:
Ku habboon ilo bambooyin kala duwan (1-3 variousm)
Baaxadda wax soo saarka IR ee la aqbali karo (3-18μm)
OPA, OPO, DFG, intracavity / extravity, cw / garaaca wadnaha
Ogeysiis muhiim ah: Tan iyo tan tan oo ah nooc cusub oo muraayad ah, gudaha kareemka waxaa laga yaabaa inuu yeesho xargo yar, laakiin ma aqbalno soo noqoshada cilladan darteed.
kooxda bannaan Og
Xadka gudbinta 0.47-18μm
Isweydaarsiga weyn ee NLO d11 = 24 pm / V
Xadka burburka (1μm, 5ns) 550MW / cm2